समग्र नगरको विकास गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने छौं - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
समग्र नगरको विकास गरी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने छौं
टि.पि. शर्मा तिमल्सिना
नमोबुद्ध नगरपालिकाका नगरप्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिनासँग नयाँ संघीय संरचना अनुसारको २०७४ बैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो भौगोलिक अवस्था जनताका इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकताको आधारमा निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने अधिकार नयाँ जारी भएको संविधानमा प्रदान गरेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाको समग्र विकास कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा नगरप्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिनासँग रेडियो ए.बि.सि. एफ.एम. ८९.८ मेगाहर्जमा गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
० नगरसभा सम्पन्न गर्नुभयो, नमोबुद्ध नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रमुख विशेषता चाहीँ के हो त ?
आगामी आ.व. ०७४÷०७५ को लागि कुल आन्तरिक आय १ करोड २३ लाख १ हजार ३ सय ५०, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट १७ करोड ६३ लाख ३१ हजार, ससर्त अनुदानबाट १४ करोड १२ लाख ७२ हजार नगर विकास कोषबाट ऋण रकम ५० लाख गरी जम्मा ३२ करोड २६ लाख ३ हजारको बजेट सिमा तयार गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानी र वित्तीय समानिकरणबाट प्राप्त अनुदान १८ करोड ८६ लाख ३२ हजार ३ सय ५० मध्ये चालु खर्च रु. ४ करोड ६८ लाख ६९ हजार ४ सय ४ र बाँकी १४ करोड १७ लाख ६२ हजार ९ सय ४६ पूँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटलाई क्षेत्रगत रुपमा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । आर्थिक विकास १ करोड ३५ लाख, सामाजिक विकास ३ करोड ७० लाख ४० हजार, पूर्वाधार विकास ५ करोड २६ लाख ५० हजार वातावरण तथा पूर्वाधार विकास १ करोड ५० लाख, संस्थागत तथा सेवा प्रवाह ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन सुशासन ३५ लाख गरी जम्मा १२ करोड २७ लाख ४० हजार रहेको नै बजेटको प्रमुख विशेषता हो ।
० नगरपालिकाको विकास र सम्बृद्धितर्फ अघि बढाउने आयश्रोतको माध्यम केलाई बनाउनु भएको छ ?
२०७१ सालमा जन्मेको नगरपालिकालाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने हाम्रो मुख्य चाहना हो । त्यहि अनुसार कार्य समेत अघि बढाएका छौं । यस नगरमा उद्योग धन्दा खासै छैन । भकुण्डेमा इँटा उद्योग छ । वातावरणको दृष्टिले त्यति उपयुक्त छैन । पोलुशन नहुने गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नै गरी नीति अघि बढाएका छौं । मुख्य आयश्रोत भनेकै एकीकृत सम्पत्ति कर हो । कुल आन्तरिक आय १ करोड २३ लाख १ हजार ३ सय ५० रहेको छ । बुद्धको नामले परिचित यो क्षेत्रको समग्र विकास गर्न कृषि व्यापार र पर्यटन हाम्रो सशक्त अभियान भन्ने नाराका साथ भौगोलिक क्षेत्रको अनुकुलतालाई ध्यानमा राखी जनताको आवश्यकताको आधारमा विकासका योजना अघि बढाएका छौं । मोटरबाटो निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यामशीलताको विकासको पहुँच सबैमा पु¥याउन हाम्रो नगरपालिकाको टिम निरन्तर लागिपर्ने छौं ।
० नगरपालिकाले एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्दा उत्पादनसँग जोडेर शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको मूल्यांकनको आधारमा तय गर्नुपर्नेमा करको दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा अव्यवस्थित ढंगबाट एकीकृत कर लिने गरेकोमा नगरवासी मारमा परेको गुनासो आएको छ, नमोबुद्ध नगरपालिका कसरी अघि बढ्छ ?
हाम्रो नगरले शुरुमा कर निर्धारण समितिबाट निर्धारण गरौं । त्यसपछि वडा अध्यक्षहरुको बिचमा छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्यौं । राजमार्ग वरिपरि र ग्रामीण भेगमा करको दर समान हुनुहुन्न । यहाँले उठाएको जिज्ञासा महत्वपूर्ण छ । उत्पादनको हिसाबले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा करको दर छुट्टाछुट्टै गरिएको छ । राजमार्गतर्फ ५०% बेसी ग्रामीण क्षेत्रमा ५०% कम गरिएको छ । एकीकृत कर निर्धारण गर्दा उत्पादनसँग जोडेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी नगरको समग्र विकास र समृद्धि हुनेगरी हामी अघि बढ्नेछौं ।
० नगरपालिकालाई चरणबद्ध रुपमा विकास गर्ने नयाँ योजनाहरु के छन् ?
नगरको चरणबद्ध विकास अन्तरगत आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको छ । आ.व. ०७४÷०७५ मा पर्यटन आकर्षण गर्न नमोबुद्ध भञ्ज्याङ्गमा स्वागत गेट निर्माण, नमोबुद्ध भञ्ज्याङ्गमा पार्किङ्ग स्थल सुधार, माने गाउँको माने स्तरोन्नती, सालथुम्की मथुरापाटी सिँढी निर्माण र पैयुबोट सिँढी निर्मँण छ भने उद्योग तर्फ अपाङ्गमैत्री स्थापना सहयोग डल्लो साबुन बनाउने, महिला, बालबालिका तथा स्वयंसेवीका क्षमता विकास, बुद्ध सर्किट, ढुङ्गेसाँघु, भ्यू टावर जाने सिँढी निर्माण पर्यटक पथगुरु योजना तयार गर्ने, संस्कृति तर्फ श्रकिृष्ण मन्दिर टावर निर्माण, कुशादेवी मन्दिर निर्माण, रेञ्जन दोर्जे स्मृति प्रतिष्ठान, मयलचौरमा पिकनिक पार्क निर्माण, कृषि तर्फ मेथिनकोट पशुविमा मार्फत भ्याक्सिनेशन, सयपत्रीफूल खेती, व्यवसायिक तरकारी उत्पादन तालिम कार्यक्रम, व्यवसायिक किसान, कृषि सामाग्री अनुदान कार्यक्रमहरु, पुजारीटापु, पिपलचौर सिँढी निर्माण, वडास्तरीय युवा अर्गानिक खेती तालिम कार्यक्रम, कपुरढुंगा एकल महिला तरकारी खेती, अर्गानिक फर्म लगायतमा वडाको आवश्यकताका आधारमा स साना योजनाहरुमा १ लाख देखि ६ लाखसम्मको योजनाहरु निर्माण गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तैगरी सामाजिक विकास तर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा जनखनव र वडाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी १ लाख देखि १० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत सडक, भवन तथा शहरी विकास, सिंचाई आयोजनामा १ लाख देखि १४ लाख ५० हजारसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास कार्यक्रम अन्तरगत मानव संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकासमा बजेट विनियोजन गरी समग्र नमोबुद्ध नगरको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको अवगत गराउन चाहन्छु ।
० नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा संक्षिप्त रुपमा बताईदिनुहोस् न ?
९० दिन भित्र बालश्रम मुक्त नगर घोषणा गर्ने, सेभ द चिल्ड्रेन र नाङशाल एशोसियसनसँग मिलेर बालमैत्री नगर बनाउने अभियानमा जुट्ने जेष्ठ नागरिकलाई घर परिवारले कुन रुपमा पालन पोषण गरेको छ । त्यसको हेर विचार कसले गरेको छ ? हेरविचार गरी पालन पोषण राम्रो गर्ने घर परिवारको बुहारीलाई सम्मान गर्ने । अन्तराष्ट्रिय पाहुना क्षेत्र निर्माण गर्ने । एक वडा एक योग केन्द्र निर्माण गर्ने, युवा मनोरञ्जनपार्क निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
० स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउने भनेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा भनिएको छ । ऐन नियम नबिनी सकेको वर्तमान अवस्थामा नगरपालिकामा कार्य कसरी अघि बढेको छ त ?
प्रदेश र संघको निर्वाचन पछि विधेक पाश भई मुलुकलाई अग्रगतिमा लान विकास र समृद्धिको बाटोमा लान सकिने अवस्था हुन्छ नै अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपनि संक्रमणकालिन अवस्थामा नै सबै कार्य अघि बढेको छ । नगरपालिकालाई आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक पूर्वाधार निर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । एक वडामा कम्तीमा एक इञ्जिनियर र सव ओभरसियरको आवश्यकता पर्छ । अहिले त वडा सचिव समेत नगरपालिकामा पर्याप्तता छैनन् । एक सचिवले ३ वटा वडा सम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले जति सक्दो छिटो गाउँपालिका र नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति खटाउनुपर्छ । योजना शाखा प्रशासन प्राविधिक शाखामा विज्ञ कर्मचारी हुनु पर्छ अनि मात्र दु्रत गतिमा स्थानीइ तहको विकास सम्भव छ ।
० सरकारले नगरपालिका घोषणा गरिदियो । नागरिकलाई नगरवासी भइयो भन्ने कुनै गर्व छैन । नागरिकलाई करको अधिक भारी बोकाउने भन्दा अरू कार्य केही गरेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ नि ?
जनप्रतिनिधि जनतासँग जनउत्तरदायि हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय मुद्दामा र विकासको सवालमा सबै राजनैतिक हल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । विकास आम नागरिकको अधिकार हो भनेर स्थापित गरिनुपर्छ । नगरको विकास सबैले मिलेर गर्ने हो नगरको प्रमुखले मात्र गरेर नगरको समग्र विकास सम्भव छैन । उत्पादनको आधारमा शहर र ग्रामीण भेगमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी करको दायरा तोक्नुपर्छ । गरिब निमुखा दलित जनजाति, अल्पसंख्यकको हित र उत्थानको लागि विशेष योजना सहित कार्य अघि बढाउने सोचका साथ हाम्रो नगर टिम सशक्त ढंगबाट अघि बढेको छ ।
५ वर्ष भित्र नगरको समग्र विकासलाई तीब्रता दिन हामी लाग्नेछौं । नगरवासी सबैले साथ दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । ६ हजार वर्ष पुरानो पहिचान भएको नमोबुद्ध यसै क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच सबैमा पु¥याउने निरोगी र स्वस्थ बन्न एक वडा एक योग स्थल निर्माण गर्न हामी लागि परेका छौं । सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन स्वदेश र विदेशमा भएका आम नगरवासीले पहलकदमी गर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । म के पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेकपा एमाले नमोबुद्ध नगर कमिटीले गतवर्ष देउसी भैलो खेलेर संकलन गरेको रकमले नगरपालिकामा सिसि क्यामेर जडान गरेको छ । अपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गरी सुखी र समृद्ध नगर बनाउन हाम्रो नगरपालिका टिम सकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका छौं । राम्रो कार्य गर्न सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु ।